Ọ bụrụ n’ịchọghị Echiche M, I Kwesighi ịjụ! | Martech Zone
Otu ihe dị mma n’ihe m na-eme bụ na ọ na-eme ka mụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ mụ na ha rụburu ọrụ rụkọọ ọrụ. Taa, anatara m obere akụkọ na-akụda mmụọ.
Ihe dị ka otu ọnwa gara aga, ejiri m awa ole na ole dejupụta nyocha zuru ezu nke ezitere m site na otu ụlọ ọrụ m rụrụ ọrụ ma na-arụ ọrụ ugbu a iji jikọta ma resell. M wụsara obi m na ụlọ ọrụ mgbe m nọ ebe ahụ ma m ka hụrụ ndị ha na ngwaahịa na ọrụ ha n'anya ruo taa. Agbanyeghị, otu ihe ahụ mere m ji hapụ ụlọ ọrụ ahụ gara n'ihu na-apụta dị ka anyị na-arụ ọrụ iji resell ikpo okwu - ihu ọchị, enweghị atụmatụ, ụgwọ dị elu, wdg.
Edere m akwụkwọ ịkpọ oku na igbe mbata m iji zaghachi nyocha ahụ mgbe m nwere ike itinye oge ahụ. Mgbe e mesịrị n'abalị ahụ na ụtụtụ echi ya, ejiri m otu elekere ma ọ bụ abụọ dị mma na-aza nyocha ahụ. Site na mpaghara ederede ghere oghe, m na-ekwu kpọmkwem ma na-akatọ m. Emechakwa, dị ka onye na-ere ahịa, mmelite nke ngwaahịa ha dị my mmasị kacha mma. Adịghị m adọpụ aka ọ bụla ma na-eche n'ihu ihe m chere na isi nsogbu ga-abụ. Enwetara m talent nke hapụrụ ụlọ ọrụ - ha ga-efu ọtụtụ ezigbo ndị ọrụ.
Ọ bụ ezie na nyocha ahụ enweghị aha, amaara m na e nwere ndị na-achọpụta ihe na usoro ntinye aka na ụlọ ọrụ m nwere ike ịchọpụta okwu m n'ezoghị ọnụ dị ka nke m. Enweghị m nchegbu banyere mmetụta ọ bụla, ha jụrụ echiche m ma achọrọ m ịnye ha ya.
Site grapevine taa (enwere mgbe osisi vaịn), Achọpụtara m na ekwuputala m okwu site n'aka ụlọ ọrụ ahụ nakwa na, na nkenke, a nabataghị m iso ụlọ ọrụ ahụ nwee mmekọrịta ọ bụla.
Ihe si na ya pụta, n'echiche nke m, ọ bụ obere ihe n'echiche ma tozubeghị. Na ọ dịghị onye ọ bụla bịakwutere m n'onwe ya gosipụtara enweghị ọkachamara. Enwere m ekele maka m, enwere ọtụtụ ndị na-enye ọrụ na ahịa nwere ike ịnye ihe m chọrọ maka obere ego na ịdị mfe karị ijikọta. M na-atụ anya inyere ụlọ ọrụ ochie m aka site na ịnye ụfọdụ nzaghachi, eziokwu.
Ọ bụrụ na ha achọghị uche m, ọ dị m ka ya bụrụ na ha ajụbeghị. Ọ ga-azọpụta m awa ole na ole nke oge m ma ọ nweghị onye ọ bụla ga-afụ ụfụ. Enweghị nchekasị, n'agbanyeghị. Dị ka ha si chọọ, agaghị m eme ihe ọ bụla iji mee ka mụ na ha nwee mmekọrịta.
Tags: gettinderboxamaghịnjikwa atụmatụọchụchọ benchmarks
Ọkt 28, 2008 na 3:25 PM
Otu ihe ị ga-atụgharị uche ebe a bụ ma akụkọ ahụ ị nụrụ ọ bụ nke gọọmentị ka ọ bụ naanị asịrị. Offlọ ọrụ bụ ebe jọgburu onwe ya maka ịkọ asịrị, ọ ga-ekwe omume na ndị na-enyocha nrubeisi gị tụpụrụ ma kwuo ụfọdụ ihe ha ekwesịghị, na onye nọ nso nụrụ ya wee were ya dị ka iwu gọọmentị. Asịrị ahụ wee gbaghaa wee gbanwee site n'okwu dị mfe nke ige ntị n'ihe ka njọ.
N’ezie nke ahụ bụ ịkọ nkọ 🙂 Ọ ga-ekwe omume na ị ga-ebipụ ụlọ ọrụ ọ bụla ị na-ekwu okwu maka ya.
Mana echere m na ajụjụ m ga-ajụ onwe m n'oge a bụ - ọ masịrị m? Y’oburu n’inwe obi ojoo n’ebe ulo oru a (nke di ka ihe n’enye gi na post gi), ya bu na ichoro ka gi na ha n’arusi oru obula?
Ọkt 28, 2008 na 6:40 PM
Daalụ maka nnukwu nzaghachi, Christian. Agaghị m eziga ma ọ bụrụ na enwere m obi abụọ ọ bụla banyere ya ịbụ asịrị ma ọ bụ eziokwu. N'ezie, ọ bụ eziokwu.
Ihe omumu maka ulo oru obula bu na, oburu na ikwesighi njikere inweta nzaghachi di nma, ezipụla nyocha nke neme ya!
Ọkt 28, 2008 na 8:48 PM
Gịnị bụ ihe mmụta a?
Ọkt 28, 2008 na 9:25 PM
Ross, nke ahụ nwere ike ịbụ okwu kachasị mma. Echere m na ihe m mụtara bụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ekwe nkwa ịkwado dollar na ọ bụghị ndị ọrụ ha ma ọ bụ ndị ahịa ha.
Enweghị m mbak na ụlọ ọrụ m na-akwụghị ha ụgwọ ọ bụla, yabụ na ekwesịghị m ịnara nke a n'onwe m. Aga m ewepu ya ngwa ngwa wee chọta ụlọ ọrụ chọrọ ige ntị.
Ọkt 29, 2008 na 2:18 PM
Echere m na ezigbo nsogbu bụ na ụlọ ọrụ anaghị aghọta uru nke na-eche ihu ụfọdụ, ike-ọkụkụ nzaghachi. Dị ka Doug kwuru, ọ bụrụ na ị chọghị ịnụ ihe ọma na ihe ọjọọ, ajụla onye nwere ike ịgwa gị eziokwu. Ọ bụrụ na ihe niile ị na-achọ dị mma, nke dị mma, na-ekpo ọkụ, na-adịghị mma. Mgbe ahụ n'aka-ahọrọ ndị ahịa / ahịa ị chọrọ nzaghachi si, na-akpọ ha elu na-ajụ "Gịnị ka ị na-amasị banyere anyị?" Otu ajụjụ, nke ahụ bụ ya, n'ihi na n'eziokwu, nke ahụ niile ọ dị ka ị nwere mmasị ịnụ na agbanyeghị.
Chefuo na ị nwere onye ahịa maara ntakịrị ihe gbasara ọrụ ị na-agba ire na ihe ọ pụtara iji ike ya rụọ ọrụ. Onye ahịa ị na-eleghara anya nwere ike ịbụ onye nwere ọgụgụ isi iji mara ajụjụ ndị ndị ahịa niile kwesịrị ịjụ ma ọ bụghị n'ihi na 95% n'ime ha amaghị ihe ọ bụla karịa ihe ị gwara ha gbasara ọrụ gị.
Ọ bụrụ n’ịchọghị idozi ma ọ bụ kwalite ihe ị nwere wee mee ya ka mma, egbula oge anyị. Enwere ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ dịka nke anyị, anyị nwere ike “enwe” gbaa gburugburu.
Ọkt 29, 2008 na 3:22 PM
N'agbanyeghị agbanyeghị nzaghachi ụlọ ọrụ kwesịrị iwere ya dị ka ohere maka imeziwanye. I nyere ha kpomkwem ihe ha rioro ka ha kwesiri inwe obi uto inweta ya.
Ọ bụrụ na ọ dị ha ka o nweghị ihe o mere, hapụ ihe ọjọọ ahụ ma rụọ ọrụ na nke ọma.
All na niile na ọ bụ mara mma ogbenye omume na-arịọ maka na-amaghị aha echiche na mgbe ahụ jide ya megide gị.
Kedu ihe kpatara m ga - eji kewapụ onye na - ere ngwaahịa m?
Ọkt 29, 2008 na 4:22 PM
Echere m na nke a na-eweta okwu ka ukwuu. Ndị ụlọ ọrụ kwesịrị ịkpachara anya banyere ihe ha na-ekwu banyere ndị na-arụsi ọrụ ike na mgbasa ozi mmekọrịta (dị ka onwe gị). Ha kwesiri imeso ndi na-ede blọgụ otu ha ga-esi emeso onye nta akụkọ. Ọ bụrụ na ha na-arịọ gị ihe ị chọrọ, ha kwesịrị iji ya mere nkatọ na-ewuli elu ma ọ bụ leghara ya anya. Ihe kachasị njọ ha nwere ike ime bụ ịhapụ ya ka ọ tinye na blog gị na ha mesoro gị otu ahụ. Ọ naghị egosipụta ha nke ọma ma ọlị.
Ọkt 29, 2008 na 5:43 PM
Echere m na nke ahụ bụ eziokwu ruo n'ókè ụfọdụ, Colin. Achọrọ m n'ezie ka ndị mmadụ na-atụ egwu iso m na-azụ ahịa ma ọ bụrụ na ihe ọjọọ emee, enwere m ike ịde blọgụ gbasara ya. Dịka ị na-ahụ n’elu, anaghị m ekwupụta onye ọ bụ, agaghị m eme ya.
Offọdụ ezigbo ndị enyi m na-arụ ọrụ maka azụmaahịa ma agaghị m eji obi ọjọọ na-anwa imebi azụmahịa ha - mana m ga-anọgide na-eme ihe n'eziokwu mgbe a jụrụ m.
Ọkt 30, 2008 na 12:18 AM
Doug, m wutere m nụ na ihe a mere. Enwere m ekele maka nzaghachi gị. Maka ihe ọ bara uru - okwu gị dị mkpa ma enwere ekele maka ha.
Feb 15, 2009 na 4:12 PM
Otu bu eziokwu ma mmadu juo ajuju obula, ya bu “gini bu ihe di iche na Indy &. . . . ”Ezigbo ajụjụ a jụrụ m n’oge na-adịbeghị anya. Azere m azịza ya n'ihi na amaara m na ọ nwere ike ịkpasu onye na-ajụ ya iwe. Agbanyeghị, mgbe a jụrụ ya oge nke 2, azara m & n'ezie. . . onye jụrụ ya hụrụ “mkparị”. Ọ bụ ezie na azịza ya bụ eziokwu.
Ọ bụrụ na anyị achọghị ịnụ azịza ya - nye ajụjụ ọ bụla - yabụ ajụla nke 1.